Agaasime khadar Cawl iyo Wariye Cabdiqani Fantastic oo laga sii dayeey xabsiga weyn ee Garoowe – Radio Daljir
Agaasime khadar Cawl iyo Wariye Cabdiqani Fantastic oo laga sii dayeey xabsiga weyn ee Garoowe
Seteembar 7, 2020 12:48 g 1
Waxaa gordhawyd laga sii dayeey Xabsiga weyn ee Magaaladda Garoowe ee caasimadda Puntland Agaasimaha Radio Daljir ee Garoowe Khadar Cawl ismaacil iyo Cabdiqani fantastic oo maalin kahor lagu xiray Garoowe.
Wariyaashan ayaa lagu si dayeey damaannad,iyaddo ilaa hadda aan la cadayn sababta lagu xiray iyo kiiska loo haysto wuxuu yahay.
Guddoomiyaha maxkamadda ayaa ku amray ciidamada inay xabsiga dhigaan wariye Khadar Cawl iyo Cabdiqani Fantastic oo arrimaha shaqo u tagay maxkamadda shalay,iyaddo maantana damaannad lagu soo dayeey.
Faahfaahin dheraad ah gordhow kaga bogo.
Nabadoonada gobalka Mudug oo ka hadlay shirarka Muqdisho ka socda (dhegayso)
Guddoomiyaha iskaashatada kaluumaystada gobalka Bari oo Waraysi gaar ah siyeey Daljir (Daawo)
Amid worsening press freedom situation, Puntland and Somaliland carry out multiple journalists’ arrest - Radio Risaala: Somali News Online 1 month ago
[…] case that took place in Garowe months ago. According to the journalists and colleagues, both were released on Monday 7 September on a condition that they would be summoned back once the prosecutor prepares […]
U Jawaab Amid worsening press freedom situation, Puntland and Somaliland carry out multiple journalists’ arrest - Radio Risaala: Somali News Online Buri halceliska